ဘော (ဝှေးစေ့) တစ်လုံးလျှင် ၁၇ သိန်း ပေါက်ဈေးဖြစ်နေပြီတဲ့..(သားရှင် ကလေးမိဘများ သိတိထားကြပါ) – Tameelay
ဘော (ဝှေးစေ့) တစ်လုံးလျှင် ၁၇ သိန်း ပေါက်ဈေးဖြစ်နေပြီတဲ့..(သားရှင် ကလေးမိဘများ သိတိထားကြပါ)
တရုတ်နိုင်ငံမှ လူဘော (ဝှေးစေ့) တစ်လုံးလျှင် ၁၇ သိန်း နှုန်းဖြင့် ရသလောက်ဝယ်ယူ
တရုပ်နိုင်ငံတွင် 2017ခုနှစ် အောက်တိုဘာလအတွင်းဆေးပညာရှင်များလေ့လာဆန်းစစ်မှုတွေ့ရှိချက်အရ ကျန်းမာ၍အသက်ရှည်နုပျိုစေရန်အတွက်
ဝှေးစေ့သည် အထူးကောင်းမွန်ကြောင်း တနှစ်လျှင် ဝှေးစေ့တစ်လုံး စားသုံးသင့်ကြောင်း
ဝှေးစေ့စားသုံးသော လူများအား ထပ်မံလေ့လာရာလူတစ်ရာတွင် ၉၈%မှာ hiv ကင်ဆာ နှင့်အခြားရောဂါများ အမြစ်ပြတ်ပျောက်ကင်းကြောင်းသိရပါတယ်
ယခုအခါ တရုပ်နိုင်ငံဝှေးစေ့ဈေးကွက်အတွင်းရှားပါးပြတ်လပ်မှုများ ကြုံတွေ့နေရတဲ့အတွက်
မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း မူဆယ် ရွှေလီလမ်းကြောင်းများမှတဆင့် တရုပ်နိုင်ငံသားများ မြန်မာပြည်မြို့များအတွင်း ဝင်ရောက်လျှက်ရှိပြီး
ဝှေးစေ့များ တရားမဝင် ဝယ်ယူလျှက်ရှိကြောင်းဝှေးစေ့တစ်လုံးလျှင် ပြည်တွင်းပေါက်ဈေးမှာ မြန်မာကျပ်ငွေ ၁၅သိန်းမှ ၁၇ သိန်းပေါက်ဈေးရှိကြောင်းသိရှိရပါတယ်
သင့်မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်းများစာရင်းထဲ၌ ရောင်းမည်ဟု ယူဆရသူများရှိပါက အောက်ဖော်ပြပါ post အောက်တွင် comment နေရာ၌ mention ခေါ်ပေးခဲ့ခြင်းဖြင့် ကုသိုလ်ယူကူညီနိုင်ပါသည် ။
credit : southtawthartv channel
တရုတျနိုငျငံမှ လူဘော (ဝှေးစေ့) တဈလုံးလြှငျ ၁၇ သိနျး နှုနျးဖွငျ့ ရသလောကျဝယျယူ
တရုပျနိုငျငံတှငျ 2017ခုနှဈ အောကျတိုဘာလအတှငျးဆေးပညာရှငျမြားလလေ့ာဆနျးစဈမှုတှရှေိ့ခကျြအရ ကနျြးမာ၍အသကျရှညျနုပြိုစရေနျအတှကျ
ဝှေးစသေ့ညျ အထူးကောငျးမှနျကွောငျး တနှဈလြှငျ ဝှေးစတေ့ဈလုံး စားသုံးသငျ့ကွောငျး
ဝှေးစစေ့ားသုံးသော လူမြားအား ထပျမံလလေ့ာရာလူတဈရာတှငျ ၉၈%မှာ hiv ကငျဆာ နှငျ့အခွားရောဂါမြား အမွဈပွတျပြောကျကငျးကွောငျးသိရပါတယျ
ယခုအခါ တရုပျနိုငျငံဝှေးစစြေ့ေးကှကျအတှငျးရှားပါးပွတျလပျမှုမြား ကွုံတှနေ့ရေတဲ့အတှကျ
မွနျမာနိုငျငံအတှငျး မူဆယျ ရှလေီလမျးကွောငျးမြားမှတဆငျ့ တရုပျနိုငျငံသားမြား မွနျမာပွညျမွို့မြားအတှငျး ဝငျရောကျလြှကျရှိပွီး
ဝှေးစမြေ့ား တရားမဝငျ ဝယျယူလြှကျရှိကွောငျးဝှေးစတေ့ဈလုံးလြှငျ ပွညျတှငျးပေါကျစြေးမှာ မွနျမာကပျြငှေ ၁၅သိနျးမှ ၁၇ သိနျးပေါကျစြေးရှိကွောငျးသိရှိရပါတယျ
သငျ့မိတျဆှေ သူငယျခငျြးမြားစာရငျးထဲ၌ ရောငျးမညျဟု ယူဆရသူမြားရှိပါက အောကျဖျောပွပါ post အောကျတှငျ comment နရော၌ mention ချေါပေးခဲ့ခွငျးဖွငျ့ ကုသိုလျယူကူညီနိုငျပါသညျ ။
ထူးထူးဆန်းဆန်း မျက်နှာကို သိသိသာသာဖြူစေတဲ့ အာလူးပြုတ်အစွမ်း ဒီတစ်ခါတော့ ဈေးကြီးနာမည်ကြီးတဲ့ အလှကုန်တွေ သုံးစရာမလိုဘဲ မျက်နှာအသားအရေကို သိသိသာသာ ဖြူဝင်းစေနိုင်မယ့် မှော်ဆန်ဆန် အာလူးပြုတ်နည်းလမ်းအကြောင်း မျှဝေပေးပါရစေ ။ ဒီနည်းလမ်းလေးဟာ သင့်မျက်နှာကို ခဏတာသာ ဖြူဝင်းစေတာမဟုတ်ဘဲ ထာဝရဖြူစေနိုင်တဲ့ နည်းလမ်းလို့တောင် တင်စားကြပါတယ် ပထမဆုံး အာလူးကို ဆေးကြောပြီး …
( 1 ) ဂဏန်း သမားများ ( သို့ ) လတွေရဲ့. 1st, 10th, 19th, 28th မှာ မွေးဖွားသူများ
နံပါတ် (၁) မင်းဟာ..ပါးနပ်တယ်..စကားကိုရှင်းရှင်းပြောတက်တယ်..ဟာသဥာဏ်ရွှင်တယ်.. ခေါင်းမာတယ်. ရိုးသားတယ်.. တဖက်သားကို မနာလို ၀န်တိုတက်တယ်..ကြင်နာတက်တယ်..ဒေါသလွယ်တယ်.. ဖော်ရွှေတယ်..တာဝန်ယူလိုစိတ်ရှိတယ်..အမြဲတမ်းကျော်ကြားသူတယောက်ဖြစ်ချင်တယ်.. လူတွေအားလုံးရဲ့အထက်မှာပဲ နေချင်တယ်.. တခါတရံမှာ လွတ်လပ်မှုကို မြတ်နိုးတယ်.. သူတပါးရဲ့အုပ်ချုပ်မှုကို မခံချင်ဘူး.မိမိကိုယ်ကို ယုံကြည်တက်တဲ့ လူစားမျိုးဖြစ်တယ်.. ငယ်ငယ်ရွှယ်ရွှယ်နဲ့ အချစ်ကို တွေ့တက်ကြတယ်..ဒါပေမယ့်.. ရင့်ကျက်တဲ့အရွယ်ရောက်မှပဲ လက်ထက်ဖြစ်ကြတာများပါတယ်.. အမြင်မတူတဲ့သူတွေနဲ့ ပြဿနာတက်ရတာကို …